ka nisaotra azy ireo tamin’ny ezaka efa vitany ary nankahery ihany koa amin’ny fiatrehana ny lalao hihaonana amin’ny ekipam-pirenen’i Soudan amin’ny alahady izao eny amin’ny kianjan’i Vontovorona. Nanolotra lelavola 10 tapitrisa ariary hividianan’ny mpilalaon’i Barea ranom-boankazo “rafraîchissement” amin’izao fiatrehan’izy ireo fanazaran-tena ataony izao. Nisaotra sy nankasitra izao fihetsika nataon’Atoa Ravalomanana izao ny mpanazatra sy ireo mpilalaon’ny Barea izay nampahafantarin’i Faneva Ima an’ity raiamandreny ity nialoha ny fihetsika nataony.
Marihana fa nahatratra 26 ireo mpilalaon’ny Barea na ny avy eto an-toerana sy ireo mpila ravinahitra tonga nanaraka an’ity fanazan-tena tetsy Mahamasina omaly alakamisy 15 novambra 2018 ity. Nambaran’ny mpanazatra mpanampy an’ity ekipa ity fa i Voavy Paulin izay tonga omaly alina tamin’ny 11 ora tany ho any no hanampy an’ireto namany ireto sisa.